“राजनेताहरु डायपर (लगौंटी) जस्तै हुन । समान कारणको लागि यि दुबैलाई समय समयमा फेरीरहनु पर्दछ” - अज्ञात
केही समय अघिसम्म माथीको उद्दरण पढ्दा म केवल हाँस्ने मात्रै गर्थें। तर जब जब आफ्नै देशका नेताहरुको हालीमुली र रजाईमा देशको हालत झन झन खस्किदैं जान थाल्यो, तब मलाई यो उद्दरण मजाक हैन हाम्रै नियतिको तितो यथार्थ जस्तो लाग्न थालेको छ।
हामी नेपालीहरु कति अभागी छौं भन्ने बुझ्न अरु केही गर्नु पर्दैन, नयाँ बन्न लागेको संविधानको बारेमा सोधे मात्रै पुग्छ । ९० दिनभन्दा कम समयमा सयभन्दा बढी बुँदामा छलफल गरेर नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने समय आउँदा, प्राय: ‘जिम्मेबार’ हरेक दलका निर्लज्ज नेताहरु जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने वक्तयबाजी गर्न थालेका छन ।
समयमै संविधान बन्न नसक्दाको अबस्थामा के हुन्छ त ? । प्रक्रियागत वा कानूनी हिसाबमा यसका विकल्प जटिल वा पूर्वनिर्धारण गर्न नसकिने भएपनि केही सम्भाव्य पाटाहरु यस्ता हुनेछन :
१) हालको संविधान सभाको आयु लम्याउने: हुन त नेपाली जनताले यो संविधान सभालाई तिनै सभामा रहेका लाउके र टाउकेका लेखा जोखाका आधारमा चाहिनेजत्ती समयका लागि भनेर नै चयन गरेका हुन, तर भन्नलाई जेसुकै भने पनि यिनै लघुबुद्दी भएका नेताहरुकै कारण संविधान समयमा बन्न नसक्ने करिब करिब प्रष्टै भैसकेको छ । अब कानूनी हिसाबमा मिल्ने नमिल्ने जेसुकै भएपनि व्यवहारीक हिसाबमा भने यही सभालाई नै निरन्तरता दिन समयाबधि थप गर्ने विकल्पलाई १ नम्बरको विकल्पको रुपमा अघि सारीनेकुराको भने अहिले नै ठोकुवा गर्दा पनि फरक पर्दैन ।
२) नयाँ जनमत लिन आम चुनाव गर्ने: नीतिगत र कानूनी प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने नेपाली जनताले हालका कुर्सीआसीन भातमारा सभासद र नेताहरु (यो शब्द धेरै ब्लगरसाथीहरुले प्रयुक्त गर्नु भएको र जे कामको लागि छानिएका हुन सोही काम पुरा गर्न नसकेपछि उपयुक्त पनि भएकोले यहाँ प्रयोग गर्दैछु) लाई केवल दुईबर्षको लागि छानेका हुन। दुइ बर्ष पुरा भएपछि नेपाली जनताको म्याण्डेटको अबधि पनि सक्कीनेछ र उपर्युक्त अबधिका लागि पठाईएका भातमाराहरुले अरु भात मारेर कुर्सीमा बस्नु कुनै पनि हालतमा सही हुँदैन । यसका लागि जनताले योग्य व्यक्ती चुन्ने अर्को मौका पाउनु पर्छ ।
एकातर्फ बिगतका दुई बर्षको अबधिमा हाम्रा नेताहरुको असली अनुहार जनताले झनै नजिकबाट चिन्ने अबसर पाए भने अर्कोतर्फ यस अबधिमा क्षेत्रीय र विश्व राजनितीमा पनि निकै परिवर्तन आएका छन । यस परिप्रेक्षमा साँच्चै जनताकै राज भएको आभास दिने हो भने नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि पून चुन्ने मौका पाउनै पर्छ ।
३) हतार हतार घाँडो पन्छाउने: एकथरी पर्यव्यक्षकहरु अन्तिम अबस्थामा आएर नेताहरुले झारा टार्ने खालको नयाँ संविधान बनाउनेमा चिन्तीत छन र यसको सम्भाबनलाई नकार्न पनि सकिन्न ।
२ बर्षसम्म जनताले संविधान बनाउन दिएको म्याण्डेटको चरम दूरुपयोग गरी सत्ताको लडाई र विभिन्न उचित-अनूचित मागहरुका साथ संसद वहिष्कार गरी बसेका भातमाराहरुले निश्चित समयाबधि सकीदैं जाँदा विभिन्न दवाबका कारण झाराटार्ने संविधान जारी गर्न सक्ने स्थिति खतरनाक भएपनि एकदमै सम्भाव्य पनि छ । जति जति संविधान जारी गर्ने मिति नजिकीदैँ छ, त्यति त्यति नै यसप्रतिको शंका र सम्भावना बजारमा प्रवल छ ।
अन्तरीम संविधान नै पटक पटक संसोधन गरीने देशमा यस्तै हतारमा संविधान बनेमा त्यसको दूरगामी असर के कस्तो भयाबह हुन्छ सजिलै कल्पना गर्न सकिन्छ ।
यहाँ कुनै एक दलप्रति वायस नभै वा कुनै एउटा गुटप्रति पूर्वाग्रह नराखी कुरा गर्ने हो भने २ बर्षको आफ्नै समयसिमामा संविधान बनाउन नसक्ने सबैदल यसप्रति जिम्मेबार छन र यो समयाबधिले सबै दल र नेताहरु राष्ट्रिय चिन्तन भन्दा सत्ताको स्वादमै रमाएको टडकारै पुष्टी गरेको छ ।
यहाँनेर मलाई माथिको उद्दरणको एकदमै सम्झना हुन्छ । डायपर वा नेपाली भाषामा भन्नु पर्दा लंगौटी एक पटक भिजेपछि पून प्रयोग गर्न मिल्दैन, वा त्यसलाई फेर्नु नै बुद्दीमानी हुन आउँछ ।
हुनत केही समय अझै बाँकी छ र माथी दिईएका केही विकल्प बाहेक अन्य विकल्पहरु पनि आउन सक्नेछन । परम आशावादी नेपाली जनताले अझै आशावादी हुन छाडेका छैनन र हामी पनि आशा गरौं निश्चित समयमा नै नेपालको संविधान जारी हुनेछ । तर यदि जारी हुन सकेन भने यसका विकल्पहरु पक्कै खोजिनेछन र यसको विकल्प खोज्नै पर्ने स्थितिमा नयाँ चुनाव गर्नु नै उचित हुनेछ ।
म आशा गर्छु समय छँदै हाम्रा जिम्मा पाएका जनप्रतिनिधिहरुले नयाँ सम्बिधान जारी गर्नेछन र हामीले हाम्रा नेताहरुलाई माथीको उद्दरणसंग दाँज्नु पर्दैन । हैन भने भिजेको लंगौटी जत्ति सक्यो त्यत्ती छिटो फेर्नुमा नै नेपाल र नेपाली जनताको हित हुने कुरा भन्नु पर्दा संकोच लिनु पर्ने देख्दिन म । भिजेको लंगौटी जत्ती बेर शरिरमा रहन्छ त्यत्तीनै त्यो शरिरको लागि हानिकारक हुन्छ। म चाहन्छु हाम्रा नेताहरुले समय छँदै आफू लंगौटी नभएको प्रमाणीत गरेर माथिको उद्दरणलाई गलत सिद्द गरिदिउन ।
ठरकी सरले डाइपरको नेपाली नाम जुराउनु भएछ। संबिधान बनाउने नं १ बाधक हो माओबादी। संबिधानसभाको लागी भएको चुनाबको परिणामलाइ दुरुपयोग गर्दै सरकार बनाउने हतियारमा परिणत गरी माओबादीले संबिधान सभाको अर्थनै बंगायो। यसमा अन्य कुर्सीमोह पार्टीहरुले कसरी माओबादी सरकार ढालेर आफूं सत्ता समाल्ने भन्ने ध्यानमै २ बर्ष बिताए। माओबादी पार्टीको सरकार ढलेपछी अरु पार्टीहरुले कुर्सीमा रमझम गर्न पाए। तर माओबादी हरुवाहरु सरकारमा गयो भनेर रात दिन फलाक्न लागे भने सत्तासिन पार्टी कसरी कुर्ची टिकाउने भनेर सक्दो सुत्र प्रयोग गर्दै लाचै पच्ने गरी सरकार टिकाउन तल्लिनभए। अन्तत: संबिधान बनाउन चुनिएको समुह सरकारको खेलमा भुलेर संबिधान बनाउने मूलमर्म नै बिर्सिए। २ बर्ष खत्तम,भत्ता हजम,जनतालाइ हातलाग्यो सुन्य।
यि कुलगांर नेतालाइ त डाइपर भन्न पनि सुहाउन्न। डाइपर प्रयोग भएपछी रिसाइकल गर्न त मिल्छ तर यि कुहिएका नेता त रिसाइकल पनि गर्न नमिल्ने गरी गनाएर सकिए।
"राजा आउ देश बचाउ" नारा लगाए भयो हैन त ?
पुष्प जी तपाइले राजा यो लेखमा राजा बोलाएको कता देख्नुभयो? म त खोज्या खोज्यै छु। तपाइको दिमाग प्रि-प्रोग्राम भए जस्तो छ,माओबादीको बारेमा केही लेख्यो कि के हि न केही ट्याग लगाएर डिमोरलाइज गर्नुहुन्छ। जुन सुत्र बर्तमान समयमा माओबादीले गर्दैछन। हैन कतै तपाइको पुरा नाम पुष्प कमल दाहाल त होइन?
जस्तो चश्मा उस्तै दृष्टि ।
मनुजी तपाइले ठ्याक्कै पत्ता लगाउनु भो जस्तो छ ।
यो लेखमा सोधेको प्रश्नको छोटो जबाफ : हो ! यिनीहरु जम्मै लंगौटी नै हुन ।
Netaharulai gali garne sabai Rajabadi hun.
चम्पकजीले ठीक भन्नुभो । मैले त राजा डाक्नुपर्यो कि भनेर सिधा जिज्ञासा राखेको हुँ । अब चोरको खुट्टा काटभन्दा उचालेजस्तो गर्नुहुन्छ भने के भन्नु खै !